Tsy nitazam-potsiny ny voina nahazo ireo mponina ao Antohomadinika ny Sampam- pianarana momban’ny Fitantanana ety Ambohitsaina, fa notontosaina ny faha-23 ny volana oktobra lasa teo ny fanaterana fanampiana ho an’ireo niharam-boina tamin’ny alin’ny talata faha-16 septambra. Nifanome tanana tamin’ireo mpianatra taona voalohany sy faharoa ireo mpampianatra sy mpanabe, ka anisan’izany ny lehiben’ny departementa misahana ny fitantanana ( gestion ) Origène Andriamasimanana, sy ireo mpampianatra, Anjarasoa Mamilalaina Randrianirina, Pierre Benjamin Rakotomahenina, Mamy Alfa Randriamiharisoa,Har inia Rabenilaina, Aimée Lucie Ranorovololona.
Nikarakara fanampiana ny olona niaram-boina miisa 494, mizara amin’ny tokantrano 96, ny departemanta. Fanangonana vola sy fitaovana fampiasa ao an-tokantrano no nahavoriana vola mitentina 3 000 000 ariary izay nahafahana nividy vary, voa maina, katsaka, siramamy, labozia, sy savony notsinjaraina tamin’ireo niaran-doza. Tao ihany koa ny ankanjo ho an’ny ankizikely sy ny vehivavy ary ny
fanampiana eo amin’ny fiainana andavan’andro toy ny sahafa, tsihy sy ny maro hafa koa. Fanaon’ireo mpikambana ao amin’ny Departemanta Fitantanana ity hetsika ity isan-taona fa ny endriny no miovaova. Efa nisy hetsika natao ihany tao alohan’izao, ka ankoatran’ny fanampiana tra-boina sy olona tratran’ny trano may tahaka izao dia efa nanao fanomezan-drà izy ireo roa taona lasa izay.
Namaly ny antson’ireo tompon’andraikitra tao amin’ny valan-javaboahary ao Tsimbazaza koa ity departemanta ity tamin’ny telo
taona lasa ka nanao izay azony natao ho fanampiana ara-tsakafo sy fanolorana fanafody ho an’ireo biby. Araky ny voalazan’i David Lambert, filoha lefitry ny mpianatra ao amin’ny taona voalohany, dia mbola hitohy hatrany ity hetsika ity isan-taona, ka mety fambolen-kazo indray no atao amin’izay fotoana izay.